ပြင်သစ်သမ္မတမက်ကရွန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Sports » International » ပြင်သစ်သမ္မတမက်ကရွန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
‘‘ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေအပေါ် မယုံကြည်မှုမှန်သမျှကို ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး’’
Fri, 2018-01-12 15:08
အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီ မှုကို သမ္မတထရန့်က လုံးဝစွန့်ပယ် လိုက်မလားဆိုတဲ့အပေါ် ကြောက် ရွံ့မိပါသလား။
မကြောက်ဖို့ ကျွန်တော်မျှော် လင့်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ အမှားကြီး တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီ သဘောတူညီမှုရှိပြီး ဒီသဘောတူ ညီမှုရဲ့ ရလဒ်က နိုင်ငံတကာအေ ဂျင်စီတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်ရေးလုပ် ငန်းစဉ်တွေ အခုကျွန်တော်တို့မှာ ရှိနေပြီ။ ပြီးတော့ ဘာမှမရှိတာ ထက် အဲဒါက ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အီရန်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတထရန့် စိတ်ပူနေတာတွေကို ပြေလည်စေဖို့ ကျွန်တော်အ ကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ စည်းရုံးဖို့ ကြိုးစားသွားပါမယ်။
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီအချိန်မှာ အမြင့်မားဆုံးကမ္ဘာ ပြဿနာအနေနဲ့ ထရန့်က ကုလ သမဂ္ဂမှာ ဒုံးကျည်သမားလို့ခေါ်ပြီး မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ လက်နက်စွမ်းပကားတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ ပြောတာဟာ အရမ်းအရမ်းရန် စတဲ့ စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုသဘောရ လဲ။
ကြည့်၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရ မယ့်ဟာနဲ့ လိုအပ်တာက ထိ ရောက်မှုရှိအောင် လုပ်ဖုိ့ပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတက အ ရမ်းအထိခိုက်မခံနိုင်မဖြစ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဲဒီလူဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာမှာရှိနေတာပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဖိအား တွေပိုမပေးဖို့၊ စကားလုံးတွေချင်း မဆန့်ကျင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ တွေကို ကာကွယ်ဖို့ တားဆီးပိတ် ဆုိ့မှုလျှော့ချဖို့အတွက် သင့်တော် တဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေ့ဖို့ လုပ်ရပါမယ်။
စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းလို့ရမယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား။ တစ်ခါတလေ မှာ သမ္မတထရန့်က မြောက်ကိုရီး ယားကို စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းမယ် လို့ ညွှန်းဆိုပုံရတယ်လို့ ဆိုလိုတာ ပါ။
အဲဒီအစိုးရကသံသယဖြစ် စေတယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ မြင်ရင်ခံ ရသူတွေ အကြောင်းကို ခင်ဗျားတို့ အများကြီးပြောကြမယ်။ ကျွန် တော်ဟာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုကို တကယ်ယုံကြည်မှုရှိတာကြောင့် ကြားနေဝါဒကို ကျွန်တော်တကယ် ယုံတယ်။ ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တကယ်ယုံ တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက် တာကို ကျွန်တော်တကယ်ယုံ တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
သမ္မတထရန့်က ကုလသမဂ္ဂကို ပိုတင်းကျပ်တဲ့၊ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ သဘောတူညီမှုတစ်ခုလိုချင်တယ် လို့ သူ့မိန့်ခွန်းမှာ ပြောခဲ့တယ်။ သူ ဟာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အရမ်းစိုးရိမ်နေတယ်။ အဲဒီသဘောတူညီမှုကနေ သူတို့ ထွက်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်က ပေးဆပ်ရလိမ့်မယ်လို့ ပြောတဲ့ အီရန်သမ္မတနဲ့ ကျွန်တော်ပြောဆို ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်လဲ။ ထရန့်ကို ခင်ဗျားဘာပြောမလဲ။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန် တော်ဟာ သမ္မတထရန့်၊ သမ္မတ ရိုဟာနီတို့နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ စစ်ရေးအဖြေ ကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။ ကျွန်တော် တို့ မြောက်ကိုရီးယားကို ဖိအားပို ပေးပါမယ်။ အထူးသဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားဟာ ရုရှားနဲ့ တရုတ် နှစ် နိုင်ငံအပေါ် တကယ်မှီခိုနေတဲ့အ တွက် အဲဒီနှစ်နိုင်ငံက ဖိအားပို ပေးရပါမယ်။ သူတို့ဟာ နျူကလီး ယားလက်နက်တွေရမှာ အသေအ ချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်နဲ့ ပတ် သက်လို့ အဲဒီိလိုအခြေအနေမျိုး တစ်ထပ်တည်း မဖြစ်လာစေချင် ပါဘူး။
သမ္မတထရန့်က တစ်ခုခုပြောပြီး လူကိုယ်တိုင်ကျတော့ တချို့ကိစ္စ တွေပြောတယ်။ တွစ်တာပေါ်မှာ သူ့ဝန်ကြီးတွေက တခြားဟာတွေ ပြောတယ်။ သူနဲ့ ဘယ်လိုညှိမလဲ။ မေးပါရစေ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး မှာ လွတ်လပ်တဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ခင်ဗျားဘယ်လိုညှိမလဲ။ အဲဒါဟာ ပရမ်းပတာပဲလို တချို့ က ပြောကြတယ်။ တချို့က ဘယ်သူ့စကားနားထောင်ရမလဲ မသိ ဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ သမ္မတ မက်ကရွန်ဟာ အမေရိကန် သမ္မတကို ဘယ်လိုညှိနှိုင်းမလဲ။
ကျွန်တော် သမ္မတထရန့်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီး ပါပြီ။ သူ့ကို ကျွန်တော် တကယ် အလေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့မှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်အဆိုပြုတာကို သူ နားထောင်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
ခုလောလောဆယ်မှာ သဘော ထားမတိုက်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ အဓိက နယ်ပယ်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ လူသိများ တဲ့ သူ့ရဲ့ အငြင်းပွားမှုက ရာသီဥ တုနဲ့ ပတ်သက်တာလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
ပြီးတော့ သမ္မတထရန့်က ပါရီ သဘောတူညီမှုက ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာ အဲဒါသူ့ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ပါ။ သူ့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ကျွန် တော်လေးစားရပါမယ်။ ဒီရာသီဥ တုပြောင်းလဲမှုကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်ဖျက်ရပါမယ်။ အဲဒါအတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ခေတ်မီအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် တို့ သဘောထားကွဲလွဲတာရှိပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဆက် ပြီး တွန်းအားပေးသွားပါမယ်။
ရုရှားဟာလည်း ခက်ခဲတဲ့ အခြေ အနေတစ်ခုဖြစ်နေလို့ ရုရှားအ ကြောင်း ပြောပါရစေ။ ရွေး ကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ခင်ဗျားအရမ်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ရုရှားရဲ့ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းမဟုတ်ဘူးလို့။
ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါကို ကျွန် တော်အတည်ပြုပါတယ်။
အဲဒါကို တကယ်ပြောခဲ့ . . . ။
ကျွန်တော်ဟာ ပြင်သစ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ အသေအချာပါပဲ။ မာ ရိန်းလီပင်းဟာ ရုရှားရဲ့ အိတ်ကပ် ထဲ အရမ်းရောက်နေပုံရပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ ကြားဝင်စွက်ဖို့ ကြိုးပမ်းချိန်က ခင်ဗျားလုပ်ပြခဲ့တယ်။ ဗလာဒီမာ ပူတင်နဲ့ ဘယ်လိုညှိနှိုင်းမလဲ။
ကြည့်၊ ရုရှားက မဲဆွယ်မှု တွေမှာ ကြားဝင်စွက်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့် လဲ။ သူတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာက ဒီမို ကရေစီစနစ်တွေမှာ လစ်ဘရယ် သမားတွေ ပိုများလာစေဖို့ဖြစ် တယ်။ အဲဒါဟာ မျှတလား၊ အဲဒါ ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ ကိစ္စ ပါ။ ကျွန်တော် ရုရှားနဲ့ လက်တွဲ လုပ်ရပါမယ်။ ရုရှားမပါဘဲ ဆီးရီး ယားအခြေအနေကို ပြင်ဆင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရုရှားမပါဘဲ မြောက်ကိုရီးယားအခြေအနေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အရမ်းခက်ပါတယ်။
အင်း . . .။ အီရန်တွေက သူတို့ အနိုင်ရလိုက်တယ်လို့ ထင်ကြ တယ်။ သူတို့အနိုင်ရလိုက်တယ် လို့ ထင်နေကြတယ်။
သူတို့ထဲက နည်းနည်းလောက်က သူတို့အနိုင်ရလိုက် တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။
ပြီးတော့ စစ်ဘက် . . . ။
အဲဒီအခြေအနေက ဆီးရီး ယားမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထိပ်တန်း ဦးစားပေးကိစ္စပါ။ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အ တူ ဂျီဟတ်ဝါဒီတွေနဲ့ အကြမ်းဖက် သမားတွေကို အနိုင်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနိုင်ရမယ် လို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒါဟာ အ ရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန် တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးဦးတည်ချက် က ဆီးရီးယားမှာပါ။
ဒုတိယဦးတည်ချက်က အဲဒီ နိုင်ငံရဲ့ တစုတစည်းတည်းဖြစ် မှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရတစ်ရပ်ရှိဖို့နဲ့ ဆီးရီးယား အတွက် အားလုံးပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံ ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ်ရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာရှာအယ်လ်အာဆတ် ဟာ အဖြေပဲလို့ ကျွန်တော် မယုံပါဘူး။ ဘာရှာဟာ ထွက်သွားရပါ မယ်။ ဘာရှာဟာ ရာဇဝတ်ကောင်ပါ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေ နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေ ရှေ့မှောက် ပို့ပြီး တုံ့ပြန်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ရုရှားနဲ့ ဆွေးနွေးရပါမယ်။ ဗလာဒီမာပူတင်ကို လက်တွဲဖော်တစ် ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော် တကယ်လေးစားပါတယ်။ ဒါပေ မဲ့ ရုရှားရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ကျွန်တော် ကြားဝင်မစွက်တဲ့အ တွက် ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေအပေါ် မယုံကြည်တာမှန်သမျှကို ကျွန် တော်လက်မခံဘူး။
တကယ်လှပတဲ့ ကိစ္စတွေပါပဲ။ ဒါ ပေမဲ့ ဒီပြောဆိုမှုကို ကမ္ဘာကြီးကအသေအချာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ အဆုံးသတ်ချင်ပါ တယ်။ စစ်ပွဲ (ဒါမှမဟုတ်) ငြိမ်း ချမ်းရေး (ဒါမှမဟုတ်) ရုရှား (ဒါမှ မဟုတ်) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု မဟုတ်ဘဲ သူဟာ သူ့ထက် (၂၄) နှစ်ပိုကြီးတဲ့ ဘရီဂီတီနဲ့ လက်ထပ် ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်က သူ့ဆရာမဖြစ် ခဲ့တဲ့ သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဆက်ဆံရေးအလုပ်ဖြစ်ပြီး သမ္မတရဲ့ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အရာတိုင်း အတွက် အင်အားဖြစ်စေတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို မေးချင် တယ်။ ခင်ဗျားက ချစ်တယ်လို့ ပြောရင် ခင်ဗျားအတွက် အချစ်ဆိုတာဘာဆိုလိုတာလဲ။ လောလော ဆယ်မှာ ကမ္ဘာကြီးက ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဇနီးနဲ့ဆက်ဆံရေးကို တကယ်သိချင်နေ ကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြပေးပါ။
ကြည့်၊ အဲဒါဟာ လင်မယား ဆက်ဆံရေးရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်နေလို့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဖို့ အမြဲတမ်းခက်ခဲပါတယ်။ အချစ်ဟာ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ တစ် စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးအတူရှိခဲ့တာ ခုဆို ဆယ် စုနှစ်တွေကြာပါပြီ။ သူဟာ ကျွန် တော့်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အတွက် သူတို့ ရဲ့ ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိနေဖို့ အရေးကြီးလား။
ကျွန်တော့်အတွက် အိမ် ထောင်ရေးက အရမ်းအရေးကြီးပါ တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် အဲဒါ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် တွေကြာပြီလို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ တယ်လေ။ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံး ချိန်မှာ အဲဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ အထောက်အပံ့ဖြစ်လို့ အဲဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းအရေး ကြီးပါတယ်။
သမ္မတမက်ကရွန် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးလို့ အရမ်းကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။
မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ လက်မခံလိုသည့် အိုင်အက်စ်အဖွဲ့မှ ဇနီးနှင့် ကလေးများ
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ လူငယ်တွေကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်တဲ့ ကိန်း
ရုရှားကမ္ဘာ့ဖလားမှာ တောက်ပခဲ့တဲ့ လူငယ်ကြယ်ငါးပွင့်